Mazuva ese Aids uye Canes uye zvekufamba zvinobatsira kubva kuKarman Healthcare
musha / Mazuva ese Aids
Achiratidza zvose 19 zvawanikwa
Kubva pamidonzvo kuenda kuzvigaro zvakapetwa uye zvimwe zvekubatsira kufamba kusvika kumakumbo uye zvimwe zvinotsiva, Karman ane sarudzo hombe yezuva nezuva - zvese pamutengo wekudzikisa uye kutumira nekukurumidza. Taona kuti akanakisa zvishongedzo zvinowedzera kuita kwekutanga mashandiro uye nyaradzo yehupenyu hwako hwezuva nezuva. Homwe dzewheelchair muenzaniso wakanaka, aya ma pouch anonamatira kuzvigaro zvemaoko uye anogadzira nzvimbo yakachengeteka yezvinhu zvako pachako uye nyore.
Ichi ichokwadi chikamu chinonakidza mukugezera wiricheya. Vamwe vepamberi chikamu vangato hodha kumisirwa zvigaro zvavo semakumbo edatya. Zvimwe zvigaro zvinogona kuve nema mods senge chrome casters kana spinergy wheelchair ine akasiyana mavara sarudzo uye zvimwe zvacho pamusoro pepamusoro shambadziro dzinoputisa pfungwa dzako kure. Asi hesi chigaro chako. Tinoti fara nazvo! Ita yako ive nhasi nekuwana akakwana ezuva nezuva aids iwe auri kutsvaga!